မြန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့ကြိုသင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
မြန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ် (MIIT) ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် ဘွဲ့ကြို သင်တန်းတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်တန်းကာလမှာ ၅ နှစ်ဖြစ်ပြီး B.E.(Hons) ဘွဲ့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Computer Science and Engineering (CSE) နဲ့ Electronics and Communications Engineering (ECE) ဘာသာရပ်တွေကို အဓိကဘာသာရပ်အနေနဲ့ သင်ကြားပေးသွားမှာပါ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုကို သင်တန်းသားဦးရေ ၆၀ စီ လက်ခံသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး တက်ရောက်လိုသူတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ သင်ကြားပို့ချမှုကို နားလည်နိုင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်ထားလိုသူတွေဟာ (၁) မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဘောဂဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ (၂) မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ သမိုင်း၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ (၃) မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ စိတ်ကြိုက်မြန်မာစာ ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ (၄) မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ပထ၀ီဝင်၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ (၅) မြန်မာစာ၊ အင်္ဂလိပ်စာ၊ သင်္ချာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ရူပဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ အစရှိတဲ့ ဘာသာတွဲတွေနဲ့ အောင်မြင်သူတွေဖြစ်ရပါမယ်။
ဝင်ခွင့်လျှောက်လွှာတွေကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၃ ရက်မှစတင်ကာ ကျောင်းသားရေးရာဌာနမှာ ထုတ်ယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နောက်ဆုံးထားကာ MIIT သို့ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ၀င်ခွင့်စာမေးပွဲကိုတော့ အောက်တိုဘာလ ၁၆ ရက်မှာ မြန်မာသတင်းအချက်အလက် နည်းပညာတက္ကသိုလ်စာစစ်ဌာန (သို့) ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် စာစစ်ဌာန တစ်ခုခုမှာ ဖြေဆိုရမှာပါ။ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို ဒီနေရာမှာ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို ဖုန်း – ၀၉ ၇၈၅၅၅၇၇၀၆ နဲ့ ၀၉ ၇၈၅၅၅၇၇၀၉ မှာ မေးမြန်း စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
မွနျမာသတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျ (MIIT) ရဲ့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသငျနှဈ ဘှဲ့ကွို သငျတနျးတှကေို ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ ဒီဇငျဘာလ ၃ ရကျမှာ စတငျဖှငျ့လှဈမယျလို့ သိရပါတယျ။
သငျတနျးကာလမှာ ၅ နှဈဖွဈပွီး B.E.(Hons) ဘှဲ့ကိုရရှိမှာဖွဈပါတယျ။ Computer Science and Engineering (CSE) နဲ့ Electronics and Communications Engineering (ECE) ဘာသာရပျတှကေို အဓိကဘာသာရပျအနနေဲ့ သငျကွားပေးသှားမှာပါ။ ဘာသာရပျတဈခုကို သငျတနျးသားဦးရေ ၆၀ စီ လကျခံသငျကွားပေးသှားမှာဖွဈပွီး တကျရောကျလိုသူတှဟော အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ သငျကွားပို့ခမြှုကို နားလညျနိုငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။
လြှောကျထားလိုသူတှဟော (၁) မွနျမာစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ သခငြ်ျာ၊ ဘောဂဗဒေ၊ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ (၂) မွနျမာစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ သခငြ်ျာ၊ သမိုငျး၊ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ (၃) မွနျမာစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ သခငြ်ျာ၊ စိတျကွိုကျမွနျမာစာ ၊ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ (၄) မွနျမာစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ သခငြ်ျာ၊ ပထဝီဝငျ၊ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ (၅) မွနျမာစာ၊ အင်ျဂလိပျစာ၊ သခငြ်ျာ၊ ဇီဝဗဒေ၊ ရူပဗဒေ၊ ဓာတုဗဒေ အစရှိတဲ့ ဘာသာတှဲတှနေဲ့ အောငျမွငျသူတှဖွေဈရပါမယျ။
ဝငျခှငျ့လြှောကျလှာတှကေို ၂၀၁၈ ခုနှဈ၊ သွဂုတျလ ၃ ရကျမှစတငျကာ ကြောငျးသားရေးရာဌာနမှာ ထုတျယူနိုငျမှာဖွဈပွီး အောကျတိုဘာလ ၅ ရကျနောကျဆုံးထားကာ MIIT သို့ တိုကျရိုကျလြှောကျထားနိုငျပါတယျ။ ၀ငျခှငျ့စာမေးပှဲကိုတော့ အောကျတိုဘာလ ၁၆ ရကျမှာ မွနျမာသတငျးအခကျြအလကျ နညျးပညာတက်ကသိုလျစာစဈဌာန (သို့) ရနျကုနျကှနျပြူတာတက်ကသိုလျ စာစဈဌာန တဈခုခုမှာ ဖွဆေိုရမှာပါ။ အသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေို ဒီနရောမှာ ဝငျရောကျကွညျ့ရှုနိုငျသလို ဖုနျး – ၀၉ ရ၈၅၅၅၇၇၀၆ နဲ့ ၀၉ ရ၈၅၅၅၇၇၀၉ မှာ မေးမွနျး စုံစမျးနိုငျပါတယျ။